Ministeran'ny fanabeazam-pirenena Tale 3 matin'ny lozam-pifamoivoizana
Tompon'andraikitra miisa 3 eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana tekinika no indray nindaosin’ny fahafatesana omaly nandritry ny lozam-pifamoivoizana nitranga teo amin’ny lalam-pirenena fahaefatra, 3 kilaometatra tsy idirana an’Andriba.
Isan’izany ny tale jeneralin’ny ofisim-pirenena misahana ny fanofanana ara-kasa, izay tsy maty teo noho eo fa tany amin’ny hopitaly tany an-toerana, raha ny fampitam-baovao. Maty tsy tra-drano kosa ny talen’ny Pascoma sy ny talen’ny Cnapmad. Naratra mafy kosa ireo mpianatra mpitsabo niaraka tamin’izy ireo. Avy tany Antsiranana nanatitra Covid organics sy arotava ary nanara-maso ny fampianarana tany an-toerana izy ireo, raha ny fampitam-baovao hatrany no niharan’izao loza izao. Niala fiolanana ny fiara tsy mataho-dalana nitondra azy ireo ka avy dia namantana hantsana. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo mpianatra roalahy, raha ny tati-baovao hatrany.